Qadasi udlala eGroutville | News24
Qadasi udlala eGroutville
x Photo: Isithombe sithunyelwe
OSEPHAKANYISWE kabili ukuba amukele umklomela wama SAMA kanye nama SATMA, umculi kaMaskandi uMnuz David “Qadasi” Jenkins udlalele abahlali base Groutville ngoLwesihlanu, ngomhlaka 22 kuNhlaba (May), eLuthuli Museum.
Lo mcimbi ubulethwe abakwa Concerts SA, I-Support, kanye nayo imnyuziyamu.
UMnuz Jenkins wazalelwe Empangeni kanti uthi igamalakhe elithi Qadasi igama elidala lesiZulu elisho ukuthi umlungu.
Uthe uthando lwakhe lwamasiko akwaZulu lwaqala esesemncane eneminyaka eyisishiyagalolunye, kanti lwakhuliswa ukulalela umculo kaMaskandi Uthe: “UJohnny Clegg Iqhawe lami lelo,” etshela abalandeli bakhe abafike emnyuziyamu ukuzo thokozela umculo wakhe. Uqhube ngokuthi akusiyena uMnuz Clegg kuphela owamenza ukuba athande uMaskandi, uthe no Phuzekhemisi ungomunye wabaculi akhula emulalela kanti emuthanda kakhulu. UMnuz Jenkins usebenza neSande Entertainment ephethwe nguMnuz Sbongiseni Shabalala, eThekwini. Uthe useke wasebenzisana neqembu lo dumo i-Ladysmith Black Mambazo. Uqhube ngokuthi useke waya nasemazweni aphesheye kwezilwandle, e-Ireland nase USA, lapho khona wamukelwa ngezandla ezimhlomphe. UMnuz Jenkins udlala isiginci kanye nenkositini kanti ngoLwesihlanu ubekade edlala neqembu lakhe elinamalungu ayisihlanu elilodwa layo okungu Mnuz Maqhinga Hadebe ongumculi omdala kaMaskandi. I-Luthuli Museum ibe nosuku lokuqwashisa abafundi ngezinhlobo ezahlukahlukene zomsebenzi, phecelezi i-Career Expo, ngoLwesihlanu oludlule 29 kuNhlaba (May)